शहर स्ट्राइकिङ् तटों र भव्य पुरानो शहर एक जोडी दावा. धेरै जस्तो मान्छेहरु सोरेंटो जाने, समुद्र र आतंकित गर्नु ठाडो भीर लागि, तर ईतिहासको लागि. सोरेंटो साँच्चै quintessential पुरानो इटालियन शहर छ. यो नेपल्स भन्दा धेरै सानो छ र साँचो पुरानो इटालियन आत्मा मात्र सानो इटालियन दक्षिण को शहर हुन सक्छ कि छ.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “7 नेपल्स मा इटाली देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-naples/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
डेट्रिप्स europetravel italyvacation नेपल्स नेपल्स Tranride रेल सुझावहरू यात्रा traveltips